Sakhigii Galbaday W/Q: Maxamed C. M. Ugaaska
Tuesday February 16, 2021 - 17:36:05 in Maqaallo by Wariye Tiriko
Suldaan Maxamed Suldaan Cabdiqaadir AHUN.
Illaahay wuxu inoo sheegay, inaynu isku nahay markhaatiga adduunyada. Idamka Eebbe qof waliba wixii looga marag kaco, ayuu safkeeda ahaanayaa
Suldaan Maxamed wuxu ka soo jeeday boqortooyo soo jireena. Haddana wuxu ahaa Suldaan qab iyo isla wayni ka xoroobay.
Suldaan Maxamed wuxu ahaa Suldaanka Salaadiinta. Ama boqortooyada faca weyn ee uu ka soo jeedo ha ahaato ama haybadiisa ha ahaatee, goobaha dhaqanku isugu yimaado uu ka sheegaanaa !
Sidoo kale, wuxu ahaa Suldaanka Soomaalida. Madax iyo minjo Soomaalida degta shanta Soomaaliyeed, wuxu ku lahaa haybad, soo dhawayn kal-furan iyo maamuusid aad u meeqaam saraysa, oo ay iyagu u garteen. Waxaad ka ogaan kartaa tacsida cara Soomaaliyeed isaga timid
Suldaan Maxamed wuxu ahaa Suldaankii Danyarta. Naxariista iyo gacan qabashada ay ka helayaan awgeed, agtiisa lagama waayi jirin danyarta. Il gaara ayuu u lahaa inta jilicdasan.
Sidoo kale, wuxu ahaa Suldaanka inta dulman. Agtiisa cid laguma dulmin, qof la dulmiyeyna uma hiilin waayin, hadal iyo hayn hadba kii lagu dulmiyo. Arintani Tolka uu Suldaanka u ahaa iyo Soomaali labadaba Way dhaaftay, waxay u gudubtay ummadaha kale ee Muslimiinta ah. Oo miyaad hilmaamtay walaalaha reer Falastiin iyo cimaamadoodii astaanta u ahayd ee uu sidan jiray hadiyo goor, si uu u muujiyo halgankooda ?
Sidoo kale, wuxu ahaa Suldaanka Martida. Qoloday doonaan ha ahaadaan, meeshay doonaanna ha ka yimaadaane, wuxu ahaa Suldaan laysku soo halleeyo oo marti-gashiin leh
Sidoo kale, wuxu ahaa Suldaanka Musaalaxada. Inta badan magaha ama maalka laysku qabsado, ee la bixin kari waayo, isaguun baa furdaamin jiray. Musaalaxadiisani may ahayn mid tolka uu ka soo jeedo u badan bal waxay ahayd mid Soomaaliyeed !
Sidoo kale, wuxu ahaa Suldaanka Ducada. Wali qof uu u duceeyay oo aan loo aqbalin lama maqal, qof xumeeyay oo karaamadiisa wax ka soo gaadhinna lama soo sheegin !
Wanaagiisa ifka uga diwaan-gashan qalin iyo hadal midina koobi maayaane, aan ku gabagabeeyo nimaan aqaanaa sheeko uu iiga sheekeeyay, wuxu igu yidhi; waxa aroos ahaa nimaanu saaxiib ahayn oo dhalinyara, gaadhi wanaagsan oo Suldaanku lahaa, oo cusub, qaalina ahaa, ayaanu jeclaysanney in arooska lagu galbiyo. Suldaankaanu u tagnay oo waydiisanay inuu gaadhigaa noo ogolaado inaanu reerka ku qaadno. ka dibna aanu u soo celino. Suldaanku hadalba nagama galine furihii buu noo dhiibay. Qoyskii cusbaa baanu ku galbinay. Markii aanu muraadkii ka soo dhammaysaney baanu aroortii u soo celinay.
Suldaanku wuxu na yidhi maxaad sidaan? Furihii gaadhiga Suldaan? Wuxu nagu yidhi; Wiilka arooska ah gaadhiga siiya. Waxaanu ku nidhi Suldaan hawshii waanu ugu soo dhammayney wiilka. Wuxu nagu yidhi; Saldanadu waxbay bixisaaye, waxba lagama ammaanaysto. Markaa Wiilka siiya hawlihiisa gaarkaa ha ku fushadee ! Sidii baanu wiilkii kula wareegay gaadhigii Suldaanka.
Dhacdadan iyo kuwo kaloo badan, oo waayeel looga qaateena aan ka hayaaba, waxay muujinayaan; samo-doonnimadiisii, dushiisii, dirirtiisii iyo deeqdiisii ballaadhnayd. Raxmaanku ha ugu deeqo naxariistiisa ballaadhan. ifka waa lagu jeclaaye aakhirana ha lagu jeclaado. Intii uu ka baxay qoys iyo qaranba Samir iyo Iimaan.
Si gaara aan u hambalyeeyo Suldaan Daa'uud Suldaan Maxamed oo maanta Taashkii Saldanada loo galiyey. Illaahay na ka yeelo midkii guuleysta if iyo Aakhiro
W/Q: Maxamed C. M. Ugaaska